जलविद्युत सरोकार समितिः आफ्नै स्वार्थको धन्दा
दोलखाको गौरीशंकर गाँउपालिकामा अहिले ५ ओटा जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । साविकका सुरी, चंखु, मार्वु र खारे गाविसमा निर्माण हुँदै गरेका आयोजनाहरुमा ग्रीनलाईफ इनर्जी प्रा.लि. ले निर्माण गरिरहेको २५ मे.वाको खानीखोला–१ जलविद्युत आयोजना, सासा इञ्जिनियरिङ्ग हाइड्रोपावर प्रा.लि ले निर्माण गरिरहेको ३० मे.वा.को खानीखोला जलविद्युत आयोजना, युनिभर्सल पावर कम्पनी
चरिकोटमा भएको तामाकोसी शेयरबारेको चक्काजाम
लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको ११ मे.वा.को तल्लो खारेखोला जलविद्युत आयोजना, कन्सोर्टियम पावर डेभलपमेन्ट प्रा.लि. ले निर्माण गरिरहेको २४.१.मे.वा.को खारे खोला जलविद्युत आयोजना र सुरिखोला हाईड्रोपावर प्रालिले निर्माण गरिरहेको ६.४ मे.वा.को सुरीखोला जलविद्युत आयोजना छन् ।
आफ्नो गाँउमा आयोजना निर्माण बन्ने भएपछि गाँउलेहरु उत्साहित भएका थिए । आयोजनाको निर्माणसँगै गाँउमा विकास गर्नका लागि आयोजनासँग व्यवस्थित रुपमा मागहरु प्रस्तुत गर्नका लागि स्थानीयहरुले सरोकार समिति निर्माण गरे । आयोजनाले स्थानीयका मागहरु पुरा नगरेको भन्दै २०७१ फागुन ५ गते स्थानीयहरुले अर्को संघर्ष समितिको निर्माण गरे । यस समितिले निमा शेर्पाको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय संघर्ष समितिको गठन गर्‍यो ।
थप सामग्री .........................
Posted by Arjun Apawad at 5/06/2018 06:34:00 PM
मरेको एउटा समाचार
आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस रै'छ । कुनै समय पूर्णकालिन सञ्चारकर्मीको भूमिकामा रहँदा थुप्रै समाचारहरु स‌कलन गरिए । ति प्रकाशन भए प्रसारण भए । त्यसै क्रममा मरेको यौटा समाचारको कुरा ।
समाचार लेखेर पढेर जिविका गर्न छोडिसकेको थिएँ । भूकम्पपछिको तत्कालिन राहतको काममा थिए । काठमाण्डौको एउटा सञ्चारमाध्यमबाट फोन आयो । बढ्दै गएको एन्टीबायोटिकको प्रयोगका बारेमा रेडियो रिपोर्ट बनाउनु पर्ने थियो ।
Posted by Arjun Apawad at 5/03/2018 08:55:00 AM
मलाई माधव गुरु अलि अभिमानी लाग्थ्यो । उनले अरुलाई सम्मान गर्दैनन् । आफैंमात्र जान्नेसुन्ने पल्टिन्छन् । के कुरा सुन्नु । यस्तो पनि बेलाबेला लाग्थ्यो । एकदिन मैले बासँग कुरा पनि गरें । बाले भन्नुभयो उप्रेतीहरुका गुरु हुन् । उनले अरुसँग कहाँ झुकेर गर्नुपर्‍यो होला र ?
Posted by Arjun Apawad at 2/10/2018 08:18:00 AM
Posted by Arjun Apawad at 1/29/2018 02:31:00 AM
१८ तस्विरमा सन् २०१७
अंग्रेजी वर्ष २०१७ सकियो। यस वर्षमा धेरै तस्विहरु खिचिए। यसक्रममा खिचिएका १८ ओटा तस्विर ।
सुरुमा एउटा प्रतियोगितामा छनौट सुचिमा परेको यो तस्विर
विपि राजमार्गको जाम : विपि राजमार्गको खुर्कोट बजारनजिक शितलपाटीमा सडक भासिएपछि बनाइएको बैकल्पिक सडक र उक्त सडकमा देखिएको जाम । यो तस्विर २०७४ बैशाख ११ गते लिइएको हो । यो तस्विर गल्लीगल्लीमा छनौट सुचीमा परेको थियो।
Posted by Arjun Apawad at 1/09/2018 09:20:00 AM
कहाँ गयो होला त्यो सर्प?
ठ्याक्कै १२ पुगेर १३ वर्ष लाग्यो । मेरो गाँउमा एउटा सर्प देखा पर्‍यो र त्यो हरायो । त्यसबेलामा मोबाइल तथा अन्य वस्तुहरुको आजजस्तो सर्वसुलभ पहुँच थिएन। भएको भए त्यसबेलाको भिडियो नै पाइन्थ्यो होला । त्यस सर्पका बारेमा छापिएको समाचार भेटेपछि त्यसबेलाको एक संस्मरण लेखेको छु ।
Posted by Arjun Apawad at 12/30/2017 07:37:00 AM